विधान महाधिवेशनकाे सम्पूर्ण तयारी पूरा : संयाेजक रामबहादुर थापा बादल
काठमाडौँ, १४ असोज । नेकपा एमालेकाे प्रथम विधान महाधिवेशनकाे तयारी पूरा भएकाे छ। आज राजधानीमा आयाेजित पत्रकार सम्मेलनमा मूल व्यवस्थापन समितिका संयाेजक कमरेड रामबहादुर थापा बादलले महाधिवेशनकाे भाेलि १२:१५ बजे गाेदावरीस्थित सनराइज सभा केन्द्रमा पार्टी अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओलीले गर्नुहुने जानकारी गराउनुभयाे।
उक्त अवसरमा वितरित संयाेजक रामबहादुर थापाद्वारा हस्ताक्षरित तथा प्रचार उपसमितिका संयाेजक खिमलाल भट्टराईले वाचन गरिएको प्रेस विज्ञप्ति निम्नबमोजिम रहेकाे छ:
हाम्रो गौरवमय पार्टी नेकपा (एमाले) को प्रथम विधान महाधिवेशन (१५, १७ असोज,२०७८) को आयोजना सम्बन्धित सम्पूर्ण तयारीहरु पूरा भएको जानकारी गराउन हामी यहाँहरुका माझमा उपस्थित छौं । र, तयारीसँग सम्बन्धित कार्यहरु निम्न बमोजिम रहेको अवगत गराउन चाहन्छौं ।
(१) नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को ऐतिहासिक प्रथम विधान महाधिवेशन २०७८ साल असोज १५, १६ र १७ गते देशकै सुप्रसिद्ध पर्यटकीय स्थल ललितपुरको गोदावरीमा सम्पन्न हुन गईरहेको छ । हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारद्धारा निर्माण सम्पन्न गरिएको यहाँस्थित सनराईज सम्मेलन केन्द्रमा यो महाधिवेशन सम्पन्न हुँदैछ भनेर भन्न पाउँदा हामीलाई गौरव महशुस भईरहेको छ ।
(२) महाधिवेशनको व्यवस्थापनलाई चुस्तदुरुस्त गर्नको निम्ति पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट स्थायी कमिटी सदस्य कमरेड रामवहादुर थापा वादल संयोजक, कमरेड शेरवहादुर तामाड. सचिव र कमरेडहरु कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, खिमलाल भट्टराई, महेश वस्नेत, विनोद श्रेष्ठ, सुजिता शाक्य, सुशिला नेपाल र पासाड. शेर्पा सदस्य रहनु भएको एक मूल व्यवस्थापन समिति पार्टी केन्द्रीय कमिटीको वैठकबाट गठन गरिएको छ । सोही जिम्मेवारी अनुरुप कार्य विभाजनसहित कार्य सम्पादन गरिरहेका छौं ।
(३) यस महाधिवेशनको उद्घाटन भोलि असोज १५ गते अपरान्ह १२.१५ वजे पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले भव्य समारोहकावीच पानसमा वत्ती बालेर गर्नुहुनेछ । उद्घाटनका क्रममा महाधिवेशनको प्रचारस्वरुप वेलुन उडाइनेछ । राष्टिय गान गाईने छ र शहीदहरुप्रति श्रद्धान्जलिपछि महाधिवेशन कार्यसूचीहरुमा प्रवेश गर्ने छ ।
(४) महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रलाई पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायतका नेता कमरेडहरुले सम्वोधन गर्नु हुनेछ ।
(५) उद्घाटन सत्रपछि महाधिवेशनको वन्दसत्रमा केन्द्रीय कमिटीको तर्फबाट अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीबाट राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव कमरेड ईश्वर पोख्रेलबाट संगठनात्मक प्रस्ताव र उप महासचिव एवं संगठन विभाग प्रमुख कमरेड विष्णुप्रसाद पौडेलबाट विधान संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरिनेछ । महाधिवेशनको दोस्रो दिन असोज १६ गते समूह छलफल र समूह नेताबाट सुझावहरुको प्रस्तुति गरिनेछ । तेस्रो दिन असोज १७ गते दस्तावेज प्रस्तोता कमरेडहरुबाट समूह छलफलबाट आएका सुझाव एवं उठेका विषयहरुलाई स्पष्ट पार्दै सारसंक्षेपीकरण गरिनेछ ।
(६) विधान महाधिवेशनमा निम्नानुसार प्रतिनिधित्व हुनेछ ।
केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारी एवं सदस्य कमरेडहरु
केन्द्रीय निकायका पदाधिकारी एवं सदस्य कमरेडहरु,
केन्द्रीय विभागबाट चुनिएका प्रतिनिधि कमरेडहरु,
प्रदेश कमिटीका सबै कमरेडहरु,
जिल्ला कमिटीबाट चुनिएका सबै प्रतिनिधि कमरेडहरु,
पार्टी सदस्य रहेका संघ र प्रदेशका सांसद कमरेडहरु,
पार्टीको तर्फबाट निर्वाचित जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उप प्रमुख कमरेडहरु,
पार्टी सदस्य रहेका स्थानीय पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख कमरेडहरु,
जनसंगठन र पेशागत संगठनहरुबाट चुनिनु भएका प्रतिनिधि कमरेडहरु,
भारत लगायत प्रवासका संघ संगठनहरुबाट चुनिनु भएका प्रतिनिधि कमरेडहरु र
पार्टी केन्द्रबाट विधान वमोजिम मनोनित सदस्य कमरेडहरु ।
यसरी विभिन्न क्षेत्रबाट चुनिएर आउनुभएका छहजारभन्दा बढी प्रतिनिधिहरुको सहभागितामा हामी भव्य र सभ्यरुपमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्नेछौं ।
प्रतिनिधि चयनमा महिला, जनजाति, दलित र अन्य समुदायको उचित प्रतिनिधित्व गराउँदै समावेशी सहभागितामा यथेष्ट ध्यान दिइएको छ ।
(७) हलमा प्रतिनिधिहरु र अन्य आवश्यक सिट प्लानिड. व्यवस्थित गरिएको छ । मंचमा पदाधिकारी एवं स्थायी कमिटीका कमरेडहरुको सिट प्लानिड. गरिएको छ । मूल सभाहलमा ३ हजार प्रतिनिधिहरु, हलको दायाँ वायाँको खाली हलहरुमा १, १ हजार प्रतिनिधिहरुको लागि बस्ने प्रवन्ध गरिएको छ । यसरी नै हलको दायाँ वायाँका प्यासेजहरुको माथिल्लो खाली भागमा टेन्ट टाँगेर थप आवश्यक पर्न सक्ने १, १ हजार क्षमताका हल निर्माण गरिएको छ । सम्पूर्णरुपमा ७ हजार क्षमताका हलहरु तयार गरिएको छ । समूह छलफलका लागि पनि व्यवस्थित स्थानहरु तय गरिएको छ ।
(८) महाधिवेशनमा सहभागी हुने प्रतिनिधि, स्वयंसेवक, सुरक्षाकर्मी, गाडीका चालकहरु सबैको लागि विहानको खाना र दिउँसोको खाजा महाधिवेशन स्थलमै व्यवस्थापन गरिएको छ । यसको लागि तुलनात्मकरुपमा सस्तो, हाईजेनिक र समयमै खाना खुवाउन सक्ने मापदण्डका आधारमा क्याटरिड.लाई जिम्मेवारी दिईएको छ ।
महाधिवेशन अवधिभर हरेक दिन विहान ९ देखि ११ वजेसम्म खानाको समय छुट्याइएको छ । सो समयसीमाभित्र सवै प्रतिनिधि कमरेडहरुले खाना खाएर हलभित्र प्रवेश गरिसक्नुपर्नेछ । दिउँसोको लागि खाजाको प्याकेट प्रबन्ध गरिएको छ । र, साँझको खाना बसेकै स्थान वा आफ्नै व्यवस्थापनमा खाने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
(९) प्रतिनिधिहरुको लागि आवासको प्रबन्ध काठमाडौंमा रहेको प्रदेश तथा जिल्ला सम्पर्क मंचहरुको सहयोगमा सम्वन्धित भूगोलका प्रदेश कमिटीहरुले नै गर्नेगरी व्यवस्थापन गरिएको छ ।
(१०) निजी साधन नभएका प्रतिनिधि कमरेडहरुको लागि ललितपुरस्थित सात दोबाटोमा झण्डासहित बसहरुको व्यवस्था गरिनेछ । ट्राफिक तथा पार्किड.को पनि यथासंभव व्यवस्थापन गरिएको छ ।
(११) महाधिवेशन सम्पन्न गर्नको निम्ति अनेरास्ववियु, युवा संघ नेपाल, जिफन्ट र खेलकुद महासंघबाट २ सयको संख्यामा स्वयंसेवकहरुको व्यवस्था गरिएको छ ।
(१२) कोरोना महामारीकै अवस्था भएकोले त्यसप्रति संवेदनशील हुँदै मास्क, सेनिटाइजरको प्रयोग र थर्मल गनबाट शरीरको तापमान लिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
(१३) महाधिवेशनको प्रचारको लागि वाल पेन्टिड., वाल पोष्टरिडलाई पूर्णतः बन्द गरिएको छ । प्रचार प्रसारको निम्ति मूलतः मिडियाको सहयोग लिइएका छ । यसका साथै काठमाडौं महानगरपालिका अन्तर्गत सडकका पोलहरुमा रहेका बोर्डमा पोष्टर राखिएको छ । काठमाडौंका दरवारमार्ग, तीनकुने, चावहिल, चुच्चेपाटी, हात्तिसार कमलादी, थापाथली लगायतका स्थानमा डिजिटल बोर्डको माध्यमबाट प्रचार प्रसारको प्रबन्ध गरिएको छ ।
(१४) मिडियाको लागि महाधिवेशनमा सहभागी हुन छुट्टै पासको प्रवन्ध गरिएको छैन । सम्वन्धित मिडियाको आफ्नै परिचयपत्र देखाएर अत्यावश्क संख्या प्रवेश गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । मिडिया सेन्टरबाट टिभी क्यामेराले लाईभ र असोज १५,१६ र १७ गते प्रेस व्रिफिड.को लागि स्थान निर्धारण गरिएको छ ।
रामबहादुर थापा वादल